Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Uppsala län / Knivsta
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 27 7 2020
Knivsta waa degmada yar oo koreeyso, waxeey lee dahay doonid-dhisid iyo aqoonsi xoog leh. Waxeey uu dhaxeeysaa magalooyinka waa weeyn, waxeeyna soo bandhigeeysaa degmada baadiyo qurxoon oo taajir ka ah fursadaha howlo dibadeed oo firfircoon. Sido kale halkaan waxaa ka jiro jawi urureed iyo dhaqameed.
295 kiilomitir oo laba jibaaran
Uppsala 21 kiilomitir
Stockholm 55 kiilomitir
Arlanda 15 kiilomitir
Guriga degmada waxuu ku yaala bartamaha Knivsta.
Xaafadaha Knivsta iyo Alsike dad badan ayaa dagan oo leh filo jirdiino leh. Laakin xaafadaha dhismaha leh ma ahan kuwa soo jidashada leh. Baadiyaheena noolna waxaa dagan in badan oo ka tirsan dadka degmada. Shirkada guriyaasha ee degmada Knivstabostäder ayaa guriyaasha ka kireeyso Knista. Sido kale degmada waxaa ku joogo kuwo kale oo guriyaal kireeyo.
Af carabi, afka iraan, af somaali, afka fiinland, af iswiidhis, af ingriis waxeey tusaale uu yihiin luuqada ku matalan degmada. Luuqadaha waxeey ku xiran yihiin kuwa soo dago iyo kuwo guuro. Bogga degmada Knivsta waxaa ku jira warbixin dhowr luqad ah waana ingiriiska, carabiga, jarmalka, farisiga, roomaaniga, soomaaliga iyo fiiniska. Bogga wuxuu ku turjuman yahay luuqado badanoo kale ayadoo la adeegsanaayo Google translate.
Warbixin ku qoran luuqado dhwor ah dhanka degmada Knivsta boggeeda intarnatka.
Degmada Knivsta waxeey taajir ka tahay ururada ayadoo leh 55 ururo oo kala duwan, ururada waxeey ka howl galaan isboortiga, dhaqanka, howlaha dibada iyo in kale oo loogu tala galay caruur, dhalinyaro iyo dad waa weeynba. Xaafadaha dhismaha leh iyo xaafadaha baadiyaha waxeey taajir ka isla markaa hayaan taariikh dhaqameed, waxeeyna laga soo bilaabaa casrigii dhagaxaanta ahaatay meelo deegaan oo meecno weeyn ku fadhiyaan. Aqoontaan iyo dhaxalka waxaa wali kor uu hayo ururo guriyaal oo badan.
Xarunta-xariirka Knivsta iyo maktabada waxeey ku yaalaan guriga degmada. Xafiiska adeega bulshada bartamaha degmada ayuu ku yaalaa. Dukaamo cunto oo badan iyo kuwo yaryar ee dharka, qalabeeynta guriga iyo waraaqadaha ayaa ku yaalo Knivsta. Hal mar usbuucii ayaa jooga boolis meesha guriga degmada, wuxuuna ka jawaabi karaa su'aalaha islamarkaasna gacanta ku qaban kara arimaha yaryarka ah. Qasnada ceeymiska, xafiiska shaqada iyo xafiiska canshuuraha ayaa ku yaalaa Uppsala.
Guriga degmada waxaa ku taalo matkabada weeyn oo uu haboon yar iyo weeynba.
12 dugsi xanaano ee degmadeed iyo 11 dugsi xanaano oo madax banaan ayaa degmada ku yaalo.
Iskuulada markii xiran yihiin, goobta ciyaaraha iskuulada dadka degmada dhamaantooda ayaa tagi karo. Halkaan waa goobta ciyaarta ee iskuulka Brännkärr.
Toban dugsiyaal hoose ayaa ku taalo Knivsta, sideed degmadeed iyo labo madaxbanaan. Sadax ka mid ah waxuu lee yahay fasalo dhexe, waana iskuulka Thuman, iskuulka Margaretha iyo iskuulka Alsike. Iskuulka Thunman agtiis waxaa ku yaalo Guriga-caafimaadka oo leh goob dabaal iyo jimicsi. Knivsta waxaa ku yaalo dugsiga sare ee Sjögrenska oo soo bandhigaayo barnaamijyo diyaarinta shaqada ah oo badan. Sido kale iskuulka waxuu lee yahay barnaamijka bilaabadka. Sido kale dugsiga sare degmooyin kale ayaa laga dhigan karaa.
Guriga-caafimaadka oo leh goob-dabaal iyo jimicsi bartamaha Knivsta uu ku yaala marki laga soo lugeeyo boosteejada-tareenka.
Waxbarashada dadka waa weeyn oo leh barashada luuqada ee soo galooytiga waa ka jirtaa Knivsta. Jaamacado iyo dugsiga dadka waa weeyn meelaha dhaw ee ku yaaliin.
Gudaha Knista waxaa ku taalo labo rug caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee dad weeynaha. Qaabilaada degdega ugu dhaw waa isbitaalka Akademiska ee Uppsala.
Markii aad booqaneeyso tusaale ahaan rugta caafimaadka, adeega bulshada, qasnada ceeymiska iyo xafiiska shaqada qofka uu baahan turjumaan xaq uu ulee yahay turjumaan. Taasi ka waran markii aad waqtigaada balansaneeysid.
Tareen, tareenka xafadeedka iyo bas waa tagaan Uppsala, Arlanda iyo Stockholm. Knivsta waxeey geeska ka jirtaa E4. Madaarka Arlanda waa madaarka calaamiga ee Iswiidhan ugu weeyn. Tareenka markii la raaco Uppsala waxeey jirtaa 10 daqiiqo, Stockholm 30 daqiiqo, Arlanda 7 daqiiqo.
Knivsta waa bulsho-tareemeed oo hore, waxeeyna xariir fiican la lee dahay Stockholm iyo Uppsala.
Akhri dheeraad ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee degmadan. UL (gaadiidka dadweynaha ee gobolka Uppsala) SL - Stockholm gaadiidkeeda maxaliga ah SJ Gego diyaaradeed
Shaqo dhiibaha ugu weeyn waa degmada Knivsta ayadoo leh ku dhawaad 900 oo shaqaale. Ka dib waxaa ku xigo warshadeeynta iyo ganacsiga. Laakin shirkadooyinka badankood waa kuwo yar, hal ama labo qof mid ee lee yihiin oo ku jiro meelo kala duwan. Qeeyb weeyn oo ka tirsan suuqa shaqada banaanka degmada ayee ku taalaa. Maalin kasto 5 000 oo qof ayaa tareen-raacid uga baxo Knista. Goobaha shaqada ee ugu muhiimsan waxeey ugu yaaliin Uppsala (isbitaalka akademiska iyo jaamacada) iyo gudaha degmada Sigtuna (meesha Arlanda).
Shaqooyinka ka banaan gudaha Knivsta